प्रचण्डको हैसियतमाथि प्रश्न : के उनी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ?
प्रचण्डको हैसियतमाथि प्रश्न : के उनी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् ? समाचार-टिप्पणी
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्र देखिएको विवादबारे छलफल गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सचिवालयका ५ सदस्यले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शनिबार लिखित आग्रह गरेका छन् । लिखित आग्रह गर्नेमा प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार बारम्बार बैठक राख्न गरेको आग्रह सुनुवाई नभएसँगै लिखित माग गरिएको हो । ‘कार्यकारी अध्यक्षले बारम्बार बैठक राख्न आग्रह गरेको अवस्थामा बैठक बस्न नसकेकोले तत्काल सचिवालय बैठक राख्न हामी ५ जनाले लिखित रूपमा अनुरोध गरेका हौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
यसअघि शुक्रबार पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका बहुमत सदस्यसँग पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बैठक गरेका थिए । शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णयअनुसार नै ५ जनाले लिखित रुपमा ओलीलाई बैठक बोलाउन आग्रह गरेका हुन् ।
बैठक बोलाउन आग्रह गरेसँगै प्रचण्डको हैसियतमाथि प्रश्न
०७६ मंसिर ४ मा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उक्त बैठकले पार्टी एकतापूर्व भएको सहमती (पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा ओलोपालो)लाई विस्थापित गर्दै ओलीलाई ५ वर्ष नै सरकारको नेतृत्व र प्रचण्डलाई पार्टीको पूर्णं अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयसँगै मुलतः दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनमा देखिएको समस्या पनि हल भएको मानिएको थियो ।
मंसिर ४ मा गरेको निर्णयलाई गत भदौ २६ मा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले थप स्पष्ट पार्ने काम गरेको थियो । बैठकपश्चात भदौ २९ मा जारी अन्तरपार्टी निर्देशन–५ ले पनि दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनलाई थप स्पष्ट पारेको छ ।
यस्ताे छ स्थायी समिति बैठकपश्चात जारी अन्तरपार्टी निर्देशन- ५ मा
३. अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने
पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तर्विरोध उत्पन्न हुने गरेको छ। एउटा समस्या समाधान भएको केही समय नबित्दै नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको छ। यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ। वैधानिक व्यवस्थामा विद्यमान अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दै पारस्परिक विश्वास र सहमतिका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। यसका लागि अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र कार्याधिकार निम्नानुसार स्पष्ट गर्नेः
३.१ अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महासचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने । सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा कार्यसूची पेश गर्ने, पारित गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने ।
३.२ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने।
३.३ अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने।
३.४ अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने। सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने।
यसकारण प्रचण्ड कार्यकारी हुन् भन्ने देखिन्न
स्थायी समितिको बैठकसँगै अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरे यता पनि केहि बैठकहरु बोलाउने विषयमा भने समस्या देखिएका थिए । प्रचण्डले आफुँ कार्यकारी भएपनि बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने विषयमा समस्या भएको भन्दै असन्तुष्टी जनाईरहेका छन् ।
शुक्रबार प्रचण्डले बोलाएको सचिवालय बैठक बहुमत सदस्यको उपस्थिति भएपनि ‘अनौपचारिक’ हुनु एउटा प्रमाण हो । अर्कोतर्फ प्रचण्ड स्वंयले हस्ताक्षर गर्दै बैठक बोलाउन ओलीलाई आग्रह गर्नु दोस्रो प्रमाण हो ।
ओली स्वंयले पनि प्रचण्डलाई ‘उपसभापति जस्तो’ भनि व्याख्या गरेका छन् । एपिवान टेलिभिजनसँगको एक संवादमा ओलीले प्रचण्ड कार्यकारी नभएको प्रष्ट पार्दै आफुँ नै अधिकार सम्पन्न अध्यक्ष भएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘म प्रथम अध्यक्ष हो । उहाँ (प्रचण्ड)द्दितिय अध्यक्ष । म पनि कार्यकारी हो, उहाँ पनि कार्यकारी । हामी काहाँ प्रथम अध्यक्षचँही झन सेरोमोनियल हुन्छ र रु कार्यकारी हो । जव प्रथम अध्यक्ष छ भने त्यस ठाउमा दोश्रो अध्यक्षले अध्यक्षता गर्न पाऊँ भन्न मिल्छ रु पार्टीको काम सवैले मिलेर गर्ने हो । म पार्टी चलाउन पाऊँ रे ! के भनेको त्यो रु प्रथम अध्यक्ष छँदाछँदै द्धितिय अध्यक्षले अध्यक्षता गर्न पाऊँ भन्नु सभापति हुँदाहँदै उपसभापतिले अध्यक्षता गर्न पाऊँ भन्ने कुरा जस्तै हो । द्दितिय अध्यक्ष भनेको द्दितिय अध्यक्ष नै हो ।’
प्रचण्डले बैठक राख्न अनुरोध होइन सहमती खोज्नुभएको हो : प्रवक्ता श्रेष्ठ
प्रचण्ड स्वंयले हस्ताक्षर गरि बैठक बोलाउन गरेको आग्रहलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या भईरहँदा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने अनुरोध नभई सहमती खोजिएको बताउँछन् । उनका अनुसार पार्टी एकताको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै लिखित पत्र दिएको बताए ।
‘बैठकको माग चाहिँ होइन, माग चाहिँ त्यसरी उहाँलाई गरिँदैन्, कार्यकारी अध्यक्षले बैठक गर्न पहल गरेकोमा तपाईंले पनि सहमती दिनुस् भनेका छौं’, श्रेष्ठले संसार न्यूजसँगको कुराकानीमा भने, ‘पार्टी एकताको संवेदनशीलताको लागि त्यसो गरिएको हो, उहाँले पहिला भन्नुभएको थियो, ‘तपाईंले बैठक डाक्नुभयो भने त्यसलाई फुटको घोषणा मान्दै म अर्को बैठक राख्छु’ भनेको कारणले पार्टी एकताप्रति संवेदनशील हुँदै तपाईँ पनि यसमा सहमती गर्नुस् भनेको हो ।’
श्रेष्ठले बताएअनुसार ओलीलाई बैठकका बारे सहमती जनाउन दुई दिनको समयसीमा दिइएको छ । बैठक समयसीमाभित्र नराखिए अर्को विकल्प सोंचिने उनले बताए । उनले भने, ‘हिजो चाहिँ भोली र पर्सि (आज र भोली)भित्रमा बैठक बसौं भनेर भनिएको हो, दुई दिनभित्र बैठक बस्नैपर्छ, बैठक राख्नुहोला भन्ने अपेक्षा गरौं, बैठक राख्नुभएन भने त त्यतिखेर सोंचौला ।’
प्रचण्ड निकटले नै कार्यकारीबाट राजीनामा दिन भने सुझाएका थिए
गत असार १० देखि भदौ २६ सम्म बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा निरन्तर ओली अनुपस्थित भएसँगै प्रचण्ड निकटकै नेताहरुले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन सुझाएका थिए ।
संसार न्यूजसँगको कुराकानीमा स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले पार्टी विवाद निकासको लागि प्रचण्डलाई अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन आफुँसहित केहि नेताहरुले सुझाब राखेको बताएका थिए ।
उनकाअनुसार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दबाब दिन प्रचण्डलाई त्यस्तो सुझाब दिइएको थियो ।
कसरी चुनिन्छन् अमेरिकामा राष्ट्रपति ? के पपुलर भोटको अर्थ छ ?
काठमाडौं । अमेरिकामा ३ नोभेम्बर यानी आज राष्ट्रपतिय चुनाव हुँदैछ…
वैद्य र विप्लवसहित अन्य वामपन्थी पार्टीबीच एकताको प्रयास, कहाँ पुग्दैछ एकता अभियान ?
काठमाडौं । मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र…
जापानबाट फर्केर राजनीतिसँगै व्यवसायिक कुखुरापालनमा रमाउँदै बाग्लुङका केसी र श्रीस
कृषिमा सम्भावना खोज्दै सिन्धुका ११ भाई
डा. केसीको आन्दोलन र कम्युनिष्ट सरकारको समाजवाद
नेकपाको घोषणापत्र र संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको डा.केसीको मागलाई किन सुन्दैन सरकार ?